नरभक्षी बाघ नियन्त्रणमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
भाद्र १५, २०७५ रमेशकुमार पौडेल
चितवन — माडीमा मान्छे मार्ने बाघलाई बिहीबार साँझ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ । भदौ ७ गते बिहीबार जंगल जाँदा हराएका माडी नगरपालिका–९ गोविन्दवस्तीका ५६ वर्षीय जितबहादुर राई भोलिपल्ट मृत फेला परेका थिए ।
माडीमा मान्छे मारेको बाघलाई बिहीबार साँझ चितवन निकुञ्जको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ । तस्बिर सौजन्य : नारदमणि पौडेल ।
उनलाई बाघले आक्रमण गरेको पत्ता लागेपछि बाघ खोज्न स्थानीयले निकुञ्ज प्रशासनलाई दवाव दिएका थिए । निकुञ्जको टोली हात्तीसहित परिचालित थियो ।
नियन्त्रणमा लिएको बाघ वयस्क भाले भएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सुचना अधिकारी नुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । त्यो बाघको अगाडिको एउटा खुट्टाको पञ्जाको नङ्ग्रा भाँच्चिएको उनले बताए । ठुला शिकार गर्न कमजोर भए बाघले मान्छे र घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गर्छ । यसअघि साउन २१ गते जगतपुरमा बाघले आक्रमण गर्दा एकजना महिलाको ज्यान गएको थियो ।
त्यो बेला पनि निकुञ्जले बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । नियन्त्रणमा लिएको एक हप्तापछि बाघ पनि मरेको निकुञ्जका सुचना अधिकारी अर्यालले जानकारी दिए ।
‘त्यो बेला जगतपुरमा नियन्त्रणमा लिएको बाघ बुढो भएको थियो । शरिर भित्र पनि घाउहरु थिए । तीनवटा दाँत पनि झरेका थिए । नियन्त्रणमा लिएको एक हप्तापछि त्यो बाघ मरेको थियो’ अर्यालले भने ।
प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ १०:१९
प्याराडाइज खोज्दै नेपाल
भाद्र १५, २०७५ सजना बराल
काठमाडौँ — कुनै गह्रौं सामान उचाल्दा वा त्यसलाई धकेल्दा हामी के भन्छौं ? होस्टे, हैंसे । तर, विसं २०१३ मा खिचिएको भिडियोमा गाडी र मोटरसाइकल बोक्दै गरेका भरियाहरू यसरी बोल्दैनन् ।
उनीहरू त ‘भन भन भाइ हो, देउसिरे’ भन्दै बल लगाइरहेका देखिन्छन् । प्रसंग ‘सर्च फर प्याराडाइज’ डकुमेन्ट्रीको ।
राजा महेन्द्रको राज्याभिषेकका अवसरमा आएका लोवेल थोमस र उनको जम्बो टोलीले त्यो बेलाको काठमाडौंलाई क्यामेरामा कैद गरेका थिए, जुन बिहीबार थापाथलीस्थित मार्टिन चौतारीमा देखाइयो । त्यसमा देउसिरेको प्रसंगभन्दा पनि मोटर बोकिएका दृश्यप्रति इतिहासविद् र डकुमेन्ट्री समीक्षकले चासो दिने गरेका छन् । त्यो बेला मोटर बोकेर ल्याउने चलन हटिसकेको तिनको भनाइ छ । त्यो डकुमेन्ट्रीमा ती दृश्य वास्तविक नभएर अभिनय गराइएको डकुमेन्ट्रीमेकर एवं पत्रकार मोहन मैनालीले बताए ।
लोवेलले राज्याभिषेकलाई नजिकबाट खिच्ने मौका पाएको उल्लेख गर्दै मैनालीले भने, ‘उनले राजालाई यस्तो गर्नू, त्यस्तो नगर्नू भनेर सल्लाहसमेत दिएका थिए रे †’
मैनालीका अनुसार, त्यो बेला बेलायतको पत्रिकाले लोवेलले बोलेको ‘वेल डन किङ’ शब्दलाई नै शीर्षक बनाएर समाचार छापेको थियो । यसरी हेर्दा राज्याभिषेकका कतिपय अंश पनि स्वाभाविक नभएर ‘स्टेज्ड’ भएको मानिन्छ । ‘डकुमेन्ट्रीमा गर्न नहुने चिज यसमा भएकाले मैले मेरो आर्टिकलमा यसलाई डकुमेन्ट्री नभएर फिचर फिल्म भनेको थिएँ,’ मैनालीले भने, ‘तर, त्यो बेलाको हाम्रो युग, चलन र वातावरण बुझ्न यसले धेरै सघाउँछ ।’
माइकल पिसेलको पुस्तक ‘टाइगर फर ब्रेकफास्ट’ र ‘सर्च फर प्याराडाइज’ को ट्रेलर हेरेका भरमा आर्टिकल लेखेका मैनाली बिहीबार फुल लेन्थ फिल्म हेर्न पाएर निकै हर्षित देखिए । फिल्म समीक्षक समाज नेपाल (फिक्सन) ले मार्टिन चौतारीमा गर्दै आएको ‘फिक्सन सेरिज’ मा यस पालि लोवेलले खिचेको पुरानो नेपाल देखाइएको थियो, जुन फिल्ममेकर अमिताभ जोशीले अमेरिकाबाट ल्याएका हुन् ।
‘यस्ता ऐतिहासिक डकुमेन्ट्री अझै खोज्न बाँकी छ,’ जोशीले भने, ‘यसबाट तत्कालीन समाजका धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ ।’
त्यसअघिका राज्याभिषेकमा क्यामेरा प्रतिबन्ध रहेको भनेर लोवेल स्वयंले आफ्नो भिडियोमा बोलेका छन् । उनले चाहिँ कसरी नजिकबाट खिच्न पाए ? ‘लोवेल अमेरिकी राष्ट्रको प्रतिनिधिका रूपमा पनि उपस्थित भएकाले भिडियो खिच्ने अवसर पाएको हुनुपर्छ भन्ने एकथरी भनाइ छ,’ मैनालीले भने, ‘राजाको श्रीपेचमा लगाइएको चराको प्वाँख उनैले अमेरिकाबाट ल्याएका रहेछन् । श्रीपेचको पछिल्लो भाग (कल्की) मा बर्ड अफ प्याराडाइज प्रजातिका सय वटा चराका प्वाँख राखिएका छन् ।’ ती प्वाँख संग्रहालयका चराको भएको बताइन्छ ।
डकुमेन्ट्रीको सिनेमाटिक फम्र्याटको सन्दर्भ कोट्टयाउँदै अमिताभ जोशीले सिनेरामा अर्थात् यो वाइड स्क्रिन शैलीमा खिचिएको हुनाले यसको ‘क्लासिक भ्यालु’ रहेको बताए । ‘यसमा क्लोज सट लिन गाह्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘लिए पनि दृश्य टुक्रिन्थे । ३५ वा १७ मिलिमिटरका तीनवटा क्यामेराले खिच्नुपथ्र्यो ।’ सिनेमास्कोप प्रविधि आएपछि वाइड स्क्रिन सट लिन सहज भएको अमिताभले बताए ।
सिनेरामा फम्र्याटका फिल्म देखाउन हलमा समेत तीनवटा प्रोजेक्टर आवश्यक हुने गरेको अमिताभको बुझाइ छ । लोवेलको डकुमेन्ट्रीलाई सामान्य प्रोजेक्टरबाट हेर्दा प्रकाश र रङ अमिल्दो देखिन्छ । ‘आजै पनि कति वटा दृश्य सेताम्मे देखियो,’ उनले भने, ‘यो त झन् रेस्टोरेसनपछिको भिडियो हो । सन् २०१४ मा क्यालिफोर्नियाका फिल्मकर्मीले यसको रेस्टोरेसन गरेका थिए । मैले उनीहरूबाटै यो सीडी पाएको हुँ ।’
राणा शासन अन्त्यपछिको प्रजातान्त्रिक नेपालमा महेन्द्रको राज्याभिषेकलाई अवसर बनाई थुप्रै विदेशी कूटनीतिज्ञ नेपाल आएको मैनालीले बताए । उनीहरूले त्यसलाई सम्भवत: अन्तिम राज्याभिषेक मानेका थिए । यही कारण विदेशीहरू बडो चासोसाथ हप्तौं हिँडेर नेपाल आएको उनको बुझाइ छ । ‘१ सय ६० जना पत्रकार र ४ सय विदेशी पाहुना आएको तथ्य छ,’ उनले सुनाए, ‘नेपालप्रति विदेशीको ठूलो चासो थियो ।’
माइकल पिसेलको किताबलाई उद्धृत गर्दै मैनालीले थपे, ‘राज्यको स्पोन्सरसिप पनि थिएन होला । भुटानी र सिक्किमी पाहुनालाई ब्रेकफास्ट दिन बिर्सिएको थियो रे † यहाँ फ्रिज नभएर कलकत्ताबाट आइस मगाएका कुराले पनि पाहुनाहरू स्वत:स्फूर्त आएको बुझ्न सकिन्छ ।’ भौगोलिक र जातीय सौन्दर्यको प्रचार भएकाले त्यही आकर्षणका कारण उनीहरू आएको हुनुपर्ने उनले अनुमान गरे ।
लोवेल आफैं भने १४ फोटोग्राफर, सहयोगी र अन्य क्रु मेम्बरसहित आएको मैनालीको दाबी छ । उनले दिल्लीबाट बीस वटा गाडी मगाएका थिए । ‘आफैं गाडी चढेर आएका मान्छेले फिल्ममा चाहिँ गाडी बोकेर ल्याएको दृश्य राखेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो किन गरिएको होला भने उनी नेपाललाई एक्जोटिक ढंगले उतार्न चाहन्थे । यहाँको पानोरमिक भ्यु देखाउन चाहन्थे ।’
तत्कालीन समाजको ऐना
लोवेलको निर्माणमा बनेको एक घण्टा २० मिनेट लामो डकुमेन्ट्रीमा नेपालसँगै अन्य देशका भिडियो पनि छन् ।
‘द रोयल कोरोनेसन’ शीर्षकमा उनले महेन्द्रको राज्याभिषेक समेटेका छन् । यसमा काठमाडौंको पुरानो रूप देख्न सकिन्छ । थापाथली पुल, न्युरोड, टुँडिखेल, बौद्ध स्तूप, बूढानीलकण्ठका तत्कालीन स्वरूप अहिले रोचक लाग्छ ।
न्युरोडको रूप कसरी फेरिएको छ भन्ने कुरा यो फिल्म हेरेपछि छर्लंग हुन्छ । ‘यसअघिका डकुमेन्ट्रीमा टोपी नलगाएका मान्छे देखिन्थे,’ मैनालीले भने, ‘यसमा चाहिँ केहीले टोपी लगाएका छैनन्, तर चप्पल छ ।’
राज्याभिषेकका क्षणमा लोवेलले गरेको एउटा न्यारेसन सुन्दा जोकोही हाँस्न बाध्य हुन्छन् । उनी भन्छन्, ‘यी राजाकी एउटी मात्र रानी छन् तथापि उनका धेरैवटी रानी हुन सक्थे ।’ भरियाहरूले काँधमा नोल हालेर गाडी बोक्दै ल्याएको दृश्यलाई उनले निकै स्थान दिएका छन् ।
डकुमेन्ट्री प्रदर्शनपछि कतिपय दर्शकलले तत्कालीन समारोह र अहिलेको बिमस्टेक सम्मेलनलाई लिएर पनि तुलना गर्न भ्याए । ‘त्यो बेला सर्वसाधारणले निर्धक्क राज्याभिषेक हेर्न पाउँदा रहेछन्,’ केहीले भने, ‘अहिले हामीलाई पेटीमा हिँड्न पनि रोकिएको छ ।’
प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०९:३५
गुठीपीडितको गुनासो–'हामी जग्गा भएका सुकुम्बासी’
'ग्रिनहाउस’ मा उपराष्ट्रपति
सिंजा सभ्यता जोगाउन जुटे स्थानीय